Global Voices teny Malagasy » Adin’i Syria, Mety ho Ananana Lahatahiry Betsaka Indrindra Hatramin’izay—Nefa Kely ny Fantatsika Momba Azy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Janoary 2017 5:17 GMT 1	 · Mpanoratra Ivan Sigal Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Arahinay ny siokan'i Bana Alabed , fito taona sy ny reniny; ireo hafatra farany  nataon'ireo mpikatroka sy mpiady miandry fotoana hitolo-batana na ho faty; ary mitady izay hanamarinana mety ho fisiana fanafihana ara-tshimika  na tantara mifandrirotra ahenoana fandarohana baomba ireo hopitaly. Ary mandritra izany fotoana izany, mitolona izahay hahatakatra raha mifanaraka amin'ny fomba fijerintsika izao tontolo izao izany vaovao izany, na manakorontana azy.
Singa ara-tetikady iankinanan'ny aindehibe ao amin'ity ady ity ny vaovao sy ny fikirakirana azy, ary lasa fitaovam-piadiana ny fifehezana ny vaovao. Tany ampiandohan'ity tolona ity ny Tafika Eletrônika Syriana , vondron-kery iray manohana ny fitondran'i Assad, nanao lasibatra ireo mpikatroka tamin'ny fanafihana “distributed denial-of-service” (DDoS), fisovohana ary rindran-tsompatra. Mandritra izany fotoana izany, samy mamely ny mpampita vaovao noho ny asany na ny fitondran'i Assad na ny ISIS.
Miezaka manova ny fizotran'ny ady amin'ny alalan'ny fampiasana herisetra maharikoriko izao ohatra ny ISIS, indrindra amin'ny fandraketana ho tahiry ny fanapahan-doha  mikendry manokana ireo Tandrefana mpanolo-baovao sy ny fanapariahana azy amin'ny alalan'ny fantsom-baovao maro.
Manoloana ny herin'ny fandisoam-baovao, dia fanamby goavana ny mitady sy manangana fitantarana mitombina momba ny ady. Mahafantatra isika ankehitriny ny fitsipika fototra sy ny teknika  amin'ny fandrafetana, fandaharam-pahamehana ary ny fanamarinana ireo vaovao mivoaka avy ao Syria. Afaka manavaka [manondro] ny zavamisy isika ary manangana porofo amin'ny alalan'ny famakafakana nisiam-pitandremana, sy tamin'ny alalan'ny teknikam-pandinihan'ny fampitam-baovao tahaka ny fitadiavana sary mivadika ankavanana miankavia, fikarohana ny toerana nandraketana ny lahatahiry. Afa-manangana sy mitazona fifandraisana anjakan'ny fifampitokisana eo amin'ny namana, mpiara-miasa ary loharanom-baovao eo akaikin'ny vava ady isika.
Ny Public Radio International mpiara-miasa  amin'ny Global Voices no namoaka voalohany  ity tantara ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/01/06/93999/
 hafatra farany: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38309852
 izay hanamarinana mety ho fisiana fanafihana ara-tshimika: https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/12/19/the-cl2-before-the-storm/
 Tafika Eletrônika Syriana: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/08/201181191530456997.html
 fandraketana ho tahiry ny fanapahan-doha: http://www.cnn.com/2014/09/02/world/meast/isis-american-journalist-sotloff/
 fitsipika fototra sy ny teknika: https://community.globalvoices.org/guide/editorial-guides/toolbox-for-authors/verifying-social-media-content/
 namoaka voalohany: http://www.pri.org/stories/2016-12-19/syrias-war-may-be-most-documented-ever-and-yet-we-know-so-little